အင်ဒို-ယူရိုပီယန် ဘာသာစကားများအား အတန်းအစားခွဲခြင်း. အနီ: ပျောက်ကွယ်ပြီး ဘာသာစကားများ. အဖြူ: အမျိုးအစားခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အထောက်အထား မခိုင်မာသေးသော ရှေးဦး-ဘာသာစကားများ. ဘယ်ဖက်တစ်ခြမ်း: ဆန်တမ် ဘာသာစကားများ; ညာဖက်တစ်ခြမ်း: ဆာတမ်း ဘာသာစကားများ